Air Compressor (လေအိုးတွဲ ကွန်ပရက်ဆာ)
<p>Air Compressor (လေအိုးတွဲ ကွန်ပရက်ဆာ)</p><p>- မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ #ARRMAN #AIR #COMPRESSOR ယခု album မှာ အားမာန်အမှတ်တံဆိပ် လေမှုတ်ကွန်ပရက်ဆာ အမျိုးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။&nbsp;</p><p>- ပစ္စတင်အမျိုးအစားလေမှုတ်ကွန်ပရက်ဆာတွေဖြစ်ပါတယ်။</p><p>- #ကွန်ပရက်ဆာခေါင်းအလွတ်တွေ၊ #လေအိုးတွဲလိုက်ပါပြီးသားတွေ၊ #အပိုပစ္စည်းတွေ၊ #ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတူ တင်သွင်းဖြန့် ဖြူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p>- အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံး စသည်ဖြင့် မိမိတို့ လိုတဲ့ အရွယ်အစားအလိုက် အနီးစပ်ဆုံးရှာဖွေလေ့ လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတစ်ပုံချင်းစီမှာ အချက်အလက်တွေရေးသားပေးထားပါတယ်။&nbsp;</p><p>- ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ဈေးတန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် စသည်ဖြင့်ထိုက်တန်မှန်ကန်အောင် စီစစ်ပြီးမှတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p>- #အားမာန်အမှတ်တံဆိပ် လေမှုတ်ကွန်ပရက်ဆာများကို အသုံးပြုလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..... တဆင့်ပြန်လည်ဖြန့် ဖြူးလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်...... လိုတဲ့ အခါသတိရနိုင်စေဖို့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။</p><p>&nbsp;- မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အခြားလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရရင် မူရင်းစက်ရုံများမှ ဈေးနှုန်နှင့် အရည်အသွေးထိုက်တန်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှာယူတင်သွင်းပေးပါတယ်။</p>
Water Pump (ရေပန့်)
<p>မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ DAYUAN (ဒါယွမ်း)အမှတ်တံဆိပ် ရေပန့် အမျိုးမျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။&nbsp;</p><p>DAYUAN (ဒါယွမ်း) Your water, your life, your DAYUAN!!! ******************************* ရေမော်တာ တံဆိပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ DAYUAN အမှတ်တံဆိပ် ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p>အတွင်းပိုင်း တည်ဆောက်ပုံ သပ်ယပ်သေချာတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှပ်ကို STEEL အမျိုးအစားအကောင်းသုံးစွဲထားပါတယ်။&nbsp;</p><p>ကွိုင်ကြိုးကလည်း 100% COPPER ပါပဲ။ ROTOR &amp; FIELD COIL IRON CORE ဆိုရင်လည်း အရည်သွေးပိုင်း စိတ်ချအောင် QUALITY အကောင်းတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။&nbsp;</p><p>THERMAL SWITCH လည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အော်တိုရပ်သွားတဲ့ အခါ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်အပေါ် မူတည်ပြီး ၁၅ မိနစ်ဝန်းကျင်ခန့် ကတော့စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ သို့ ပေမယ့်လည်း THEORY အရ ဗို့ အားကျလာတာနဲ့အမျှ မော်တာ အပူချိန်ပိုတက်လာ တတ်တာမို့အတတ်နိုင်ဆုံး တော့ဗို့ အားအခြေအနေကို သတိ ထားသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်ပူပူ လောင်ဖို့ ကတော့အတော်ဝေးပါတယ်။&nbsp;</p><p>နောက်တစ်ခုက ဘော်ဒီဆေးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တာရှည်ခိုင်ခံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရတဲ့သဘောရှိတာမို့ဘော်ဒီဆေးသားဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p>တချို့ ရေတွေဟာ ထုံးဓာတ်များပါတယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ဘော်ဒီပိုင်းကို အရည်အသွေးမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ သတ္ထုဘော်ဒီ၊ အရည်ကျိုသံဘော်ဒီ၊ စတီးဘော်ဒီ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။&nbsp;</p><p>ဈေးတန်းကလည်းအမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဈေးတန်းကြောင့် သတ္ထုဘော်ဒီ အမျိုးအစားကို အသုံးပြုဖို့ ရွေးမယ်ဆိုရင် ဘော်ဒီဆေးသားဟာ သေချာဂရုပြုရမယ့် အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။ DAYUAN ရေပန့် တွေမှာ အတွင်းပိုင်း တည်ဆောက်ပုံကို လေ့ လာနိုင်စေဖို့နမူနာ ASSEMBLY ပုံတစ်ခု ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ တဆင့်ခြင်းစီလေ့ လာနိုင်စေဖို့ ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို နာမည်နှင့်တကွ လေ့ လာနိုင်အောင် မြန်မာမှုပြုပေးထားပါတယ်။ DAYUAN ရေမော်တာတွေကို အသုံးပြုလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တဆင့်ပြန်လည်ဖြန့် ဖြူးလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အခါ သတိရနိုင်စေဖို့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။&nbsp;</p>
Auto Pressure Pump (အော်တိုရေပန့်)
<p>မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ယခု album မှတော့အိမ်သုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး အော်တိုပန့် တွေကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။&nbsp;</p><p>အလိုအလျှောက်ရေဖိအားထိန်းပန့်တွေလို့ပြောလို့ ရပါတယ်။&nbsp;</p><p>အော်တို ပန့် တိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်တူတယ်လို့ တော့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ နိမ့်ရာမှ ရေကို မြင့်ရာသို့ တင်တဲ့ အခါ၊ မြင့်ရာမှ ရေကို နိမ့်ရာသို့မိမိလိုအပ်တဲ့ပြင်းအားတစ်ခု ရချင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ရေပန့်တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အသုံးပြုရေပိုက်လိုင်းတလျှောက်မှာ မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ ရေဖိအားတစ်ခု အမြဲတမ်းရှိနေအောင် သတ်မှတ်ခိုင်းစေကြတဲ့ အခါတွေမှာတော့အခုမိတ်ဆက်ထားတဲ့auto-pressure pump တွေကို အသုံးပြုကြရပါတယ်။</p><p>ရေပူရေအေးစက်တွေ၊ အဝတ်လျှော်စက်တွေ၊ ရေသန့် စက်တွေ၊ အဖျော်ယမကာနှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေ စသည်ဖြင့် နေရာစုံတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပါတယ်။&nbsp;</p><p>ပထမဦးဆုံး ရေပန့် တစ်လုံး မရွေးချယ်ခင် ကြိုတင်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်။&nbsp;</p><p>၁။ ရေထွက်ပမာဏ&nbsp;</p><p>၂။ ရေစုပ်တင်အမြင့်&nbsp;</p><p>၃။ တွန်းတင်အမြင့်&nbsp;</p><p>၄။ အဝင်ပိုက်၊ အထွက်ပိုက်အရွယ်အစား&nbsp;</p><p>၅။ မိမိရဲ့လက်ရှိလျှပ်စစ်မီးအားအနေအထား&nbsp;</p><p>၆။ မော်တာဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ပုံ&nbsp;</p><p>၇။ မော်တာကာကွယ်မှုစနစ်&nbsp;</p><p>၈။ ဈေးနှုန်းအတိုင်းအတာ&nbsp;</p><p>၉။ ရောင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာ&nbsp;</p><p>၁၀။ အသုံးပြုစဉ် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကိစ္စများ မိမိကိုယ်တိုင်နားလည်ခြင်း သည်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p>တချို့ အချက်တွေက မိမိကိုယ်တိုင် ပစ္စည်းကိုကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပေမယ့်၊ တချို့ အချက်အလက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းဆိုင်၊ အရောင်းသမားဆီကနေတိတိကျကျ သိအောင်မေးဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p>မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတွက် အခြားသော design, flow, head မတူတဲ့အရွယ်များကိုလည်း ဈေးနှုန်းမှန် အရည်အသွေးမှန် စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းပေးပါတယ်။</p>
Air Compressor -Piston Type (လေအိုးတွဲ ကွန်ပရက်ဆာ)
<p>- အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံး စသည်ဖြင့် မိမိတို့ လိုတဲ့ အရွယ်အစားအလိုက် အနီးစပ်ဆုံးရှာဖွေလေ့ လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတစ်ပုံချင်းစီမှာ အချက်အလက်တွေရေးသားပေးထားပါတယ်။&nbsp;</p><p><br></p><p>- ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ဈေးတန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် စသည်ဖြင့်ထိုက်တန်မှန်ကန်အောင် စီစစ်ပြီးမှတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p><br></p><p>- လေမှုတ်ကွန်ပရက်ဆာများကို အသုံးပြုလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..... တဆင့်ပြန်လည်ဖြန့် ဖြူးလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်...... လိုတဲ့ အခါသတိရနိုင်စေဖို့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။</p><p><br></p><p>- မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အခြားလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရရင် မူရင်းစက်ရုံများမှ ဈေးနှုန်နှင့် အရည်အသွေးထိုက်တန်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှာယူတင်သွင်းပေးပါတယ်။</p><p>Brand Xinya</p><p>Model XY-438-120</p><p>Power 1.35KWx4</p><p>Voltage 220 VAC</p><p>Frequency 59Hz</p><p>Speed 2650 r/min</p><p>Capacity 768 L/min</p><p>Pressure 0.8 mpa</p><p>Tank 120L</p><p>Dimension 1360-430-750 mm</p><p>Weight 92.4 kg</p><div><br></div>
<p>- အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံး စသည်ဖြင့် မိမိတို့ လိုတဲ့ အရွယ်အစားအလိုက် အနီးစပ်ဆုံးရှာဖွေလေ့ လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတစ်ပုံချင်းစီမှာ အချက်အလက်တွေရေးသားပေးထားပါတယ်။&nbsp;</p><p><br></p><p>- ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ဈေးတန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် စသည်ဖြင့်ထိုက်တန်မှန်ကန်အောင် စီစစ်ပြီးမှတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</p><p><br></p><p>- လေမှုတ်ကွန်ပရက်ဆာများကို အသုံးပြုလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..... တဆင့်ပြန်လည်ဖြန့် ဖြူးလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်...... လိုတဲ့ အခါသတိရနိုင်စေဖို့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။</p><p><br></p><p>- မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အခြားလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရရင် မူရင်းစက်ရုံများမှ ဈေးနှုန်နှင့် အရည်အသွေးထိုက်တန်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှာယူတင်သွင်းပေးပါတယ်။</p><p><br></p><p>Brand Xinya</p><p>Model XY-5824</p><p>Power 1.6KW</p><p>Voltage 220 VAC</p><p>Frequency 50 Hz</p><p>Speed 2650 r/min</p><p>Capacity 226 L/min</p><p>Pressure 0.8 mpa</p><p>Tank 24 L</p><p>Dimension 560-300-540 mm</p><p>Weight 21.4 kg</p>
OP ပန့်များ 32/R60Hz
စင်ကြယ်သောရေနှင့်Non-aggressiveဓာတုအရည်များပေးဝေရေး၊OPပန့်များဟာရေအလိုအလျောက်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ဆည်မြောင်းရေတွင်းများမှရေပေးဝေရေးနှင့်ပြည်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်လျော်ပါသည်။OPပန့်များကို ဖိအားယူနစ်များအတွက်လေယဉ်မှုးကစုပ်စက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။materials cast Ion,AISI304 stainless steel တို့ဖြစ်ကြသည်
ဆေးဖျန်းပုံး Battery Sprayer
29000 ~ 32000 Kyats
ကျေးဇူးရှင်တောင်သူဦးကြီးများအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကျွန်တော်များ KLH Co.,Ltd. မှ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသော Binda အမှတ်တံဆိပ် အရည်အသွေးမြင့်ဘက်ထရီဆေးဖျန်းပုံးများအား ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။ @@@ရန်ကုန်အတွင်း အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ @@@နယ်အတွက် ကားဂိတ်၊သဘောင်္ဆိပ်၊ဘူတာ အရောက် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ....................................................
Max Pro QDX 0.55 HP - 550W ရေမြုပ်ပန့်
<p>Max Pro QDX 0.55 HP - 550W ရေမြုပ်ပန့်&nbsp;</p><p><br></p><p>ရေမြုပ်ပန့် ဝယ်ချင်လို့မေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။</p><p>သုံးရတာကတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော်။&nbsp;</p><p>&nbsp;အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားတယ်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့</p><p>Modern QDX 0.55</p><p>Brand Max Pro</p><p>Color Blue&nbsp;</p>
Max Pro QDX 0.37 HP - 370W ရေမြုပ်ပန့်
<p>ရေမြုပ်ပန့် ဝယ်ချင်လို့မေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။</p><p>သုံးရတာကတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော်။&nbsp;</p><p>&nbsp;အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားတယ်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့</p><p>Modern QDX 0.37</p><p>Brand Max Pro</p><p>Color Blue&nbsp;</p>
Vacuum Cleaner (YILI - ယင်းလိ ဖုန်စုပ်စက်)
<p>* အိမ်ရှင်မတို့အတွတ် သတင်းကောင်း........</p><p>* အိမ်ဦးနတ်ကြီးတွေကို ဝယ်ခဲ့ဖို့ ပူဆာလိုက်တော့ .....</p><p><br></p><p>* အရင်ကလို တံမြတ်စည်း ကိုင်ပြီး မပြောင်မလက်ပဲ အချိန်ကုန် လူပန်း နဲ့ စိတ်ရူပ်ခံနေအုံးမှာလား?</p><p>* YILI (ယင်းလိ) ရဲ့ YL6253-10 ဖုန်စုပ်စက်လေးက အိမ်ရှင်မတွေကို ကူညီဖို့ YILI (ယင်းလိ)ဖုန်စုပ်စက် ရှိနေပါပြီ။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့</p><p>Power : 1200W</p><p>Model : YI16253-10</p><p>Maximum noise : Dry Type</p><p>Vacuum Type : Vertical</p><p>Dust Storage : Fabric Type Dust Bag</p><p>Line Length : 5m</p><p>Suction Nozzle Type : Anti-static ground brush</p><p>Additional Feature : Speed Adjust</p><p>Warranty : :6Months Warranty မေးထားတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရေအသွေးအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။</p><div><br></div>
Auto Pressure Pump (Max Pro ရေဖိအားစက်)
<p>* နေအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ အ၀တ်လျှော်စက်၊ ရေချိုးခန်း၊Toiletတွေမှာ ရေအားနည်းတာတွေဖြေရှင်းဖို့ Max Pro လာပါပြီ။</p><p>* (၁ဝဝ) % ကြေးကွိုင်စစ်စစ် Max Pro (Auto Pressure Pump ငါးမူးပန့်)ကို သာရွေးချယ်လိုက်ပါခင်ဗျ.......။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့</p><p>Model : Max Pro PS-130</p><p>Max H : 35m</p><p>Watt : 370W</p><p>Voltage : 220V</p><p>Brand : Max Pro</p>
Max Pro Water Motor (ရေမော်တာ)
<p>(၁)ထပ်တိုက် (၂)ထပ်တိုက် ၅လွှာ ၆လွှာ တိုက်ခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်&nbsp;</p><p>နေအိမ်တိုင်းအတွက် အဆင်ပြေဆုံး .....Max Pro QB-80 _ခေါင်းချွန်ပန့် (၁ကောင်အား)</p><p>